Fanondrahana tsara indrindra fanondrahana Shampoo ho an'ny varotra - TopFillers
Shampoo Fandefasana milina
Home / Famonoana machinery / Shampoo Fandefasana milina
Ny milina fanasan-damba Shampoo dia natao hamolavola ny filan'ny orinasa Shampoo. Izahay dia manamboara ny fitaovana tsara indrindra hiatrehana ny filàna ny famolavolana ny Shampoo ary mahafeno ny tanjon'ny vokatrao.
Ny Shampoo dia iray amin'ireo vokatra azo avy amin'ny ranon-tsakafon'i NPACK izay ahafahana mameno sy manaparitaka. Ny fitaovana dia afaka mampiasa rafitra feno fonosana fitaovana fametahana shampoo, labiera, coupe, ary conveyors mba hihaona ny fandaharam-panampin'ny shampoo ao amin'ny trano iray. Ny fitaovantsika koa dia afaka mameno sy manamboatra ranon-tsavily maro hafa amin'ny vidiny ambony, ao anatin'izany ny fisotroana sy ny vokatra avy amin'ny entona isan-karazany. Amin'ny fampiasana rafitra fitaovana azo antoka azonay omena, dia afaka manamaivana ny faharetan'ny faharetan'ny ranon-javatra ianao.
INTEGRATE SYSTEM SYSTEM OF SHAMPOO FILLING MACHINES
Ny Shampoo dia iray amin'ireo vokatra maoderina izay mety hampiasana ny ranon-tsakay. Ankoatra ny fitaovana fametahana shampoo, dia mitondra karazana entana hafa koa izahay mba hamenoana ny fonosana fanangonam-bokatra, hampihenana ny fisarahana rehefa mitombo ny vokatra. Manolotra safidy maro isan-karazany isika mba hahafeno ny fepetra manokana anananao.
Taorian'ny dingana fanatobiana, ny fitaovam-pandehanana dia mety hikirakirina kapa maromaro amin'ny karazan-tavoahangy maro samihafa mba hanamboarana tombo-kase mahamay izay manakana ny fahasimbana sy ny fivoahana. Ireo laboziana dia afaka mampihatra marika mazava, Mylar, na labiera taratasy ho an'ny fitaterana misy marika, lahatsoratra ary sary. Mba hahazoana antoka fa ny vokatra shampoo dia mandeha amin'ny fahombiazan'ny fiantombohan'ny fanombohana mba hamaranana mandritra ny famenoana sy ny famafàna fonosana, dia afaka mampiasa rafitra mpanodina voatondro ianao amin'ny programa haingana. Amin'ny fampiasana fitaovana an'io fitaovana io, dia afaka mandray soa avy amin'ny tsipika famokarana tsara indrindra izay manome anao ny vokatra tianao.
IREO FIFANEKENA FIFANEKENA EO AMIN'NY MACHINERY
Ny safidy feno amin'ny fonosana famonosana sy ny famenoana fanafody dia azo ampiasaina arakaraka ny fampiharana. Mitondra fitaovana amina sehatra maro samihafa isika, miaraka amin'ny famolavolan'ny programa izay mahatonga azy io ho mora ampiasaina amin'ny karazam-pamokarana. Raha mila fanampiana ianao amin'ny fitadiavana milina fantsom-panafarana tsara indrindra sy fitaovana hafa ho an'ny famokarana, dia afaka manampy anao amin'ny fisafidianana ny ordinatera, ny rafitra sy ny fametrahana ny rafitra. Amin'ny alalan'ny fampiasana rafitra fanangonam-bokatra, dia afaka mahatsapa ny fivilian-tsasatra kely ianao ary manatsara ny vokatra amin'ny fotoana maharitra.
Raha te-hanomboka amin'ny famolavolana sy fametrahana ny fonosana vaovao sy fametrahana rafitra ianao dia mifandraisa aminay anio ary afaka manampy anao ny ekipa mahay sy matihanina. Raha te-hanatsara bebe kokoa ny asanao ianao ary hahazoana antoka fa hahazo ny ankamaroan'ny fitaovam-panorenana shampoo ianao, dia manolotra tolotra fanampiny toy ny fampiofanana mpitantana, ny fanompoana eny amin'ny saha, ny fampivoarana ny fampisehoana, ny fanompoana eny amin'ny saha, ary ny fanofana.
Betsaka ny Shampoo mpamatsy vola mpaninjara volamena
Famonoana machinery, Shampoo Fandefasana milina
Fomba a.Can ampiasaina amin'ny famenoana fitaratra, plastika, tavoahangy metaly, b.high filling precision c.Fast filling speed. d.Parts azo nosoloana mora mora E.Easy mba hanadio g.You dia afaka mividy afa-mameno sy karaoty machine, Afaka mividy ny tsipika feno koa Process Flow Feed Bottle ---- Fandefasana Lalana ---- Machine kapila ---- Fitaovana fanoratana ---- Injet Print Machine ---- Cap Automatic Sleeving ---- Masindahy masira ---- Manangona latabatra ---- adhesive machine machine ---- Fikojakojana daty Daty MWFC-1 MWFC-2 MWFC -3 MWFC-4 MWFC-5 MWFC-6 Mameno fahafahana (ml) 5-30 15-100 30-150 60-300 200-500 500-1000 Speed ​​(tavoahangy / min) 70-80 50-70 50-70 40 -60 20-40 20-40 Ny fahafahana manempotra ny rivotra 4Kg ...
Tsara kalitao tsara fanondrahana fanondrahana vovobonin'ny hatsikana tsara
Io milina fanaraha-maso sy mandany pneumatic manana sehatra fampiharana ny sakany, famarana fitsipika tsotra, tsara endrika sy mora fanadiovana, mety ho ny fipoahana-porofo vondrona 1.Reasonable famolavolana, voalamina tsara endrika, tsotra fandidiana, ampahany hanaraka ny alemà FESTO / Taiwan AirTac pneumatic singa . 2. Ny ampahany amin'ny fifandraisana amin'ny fitaovana dia natao tamin'ny 304 na 316 stainless steel, mifanaraka amin'ny fepetra GMP sy ny sakafo ara-tsakafo. 3. Ny famenam-bolana, ny famenoana haingana dia afaka manova, ny famenoana ny marina dia avo. 4. Adopio ny fitsangatsanganana manohitra, manintona sy manamboatra fantsona. Fampiharana Azo ampiasaina ho an'ny fanafody, vokatra andavanandro, sakafo ary indostria manokana. Ary fitaovana tena tsara ho an'ny adhesive ...
Automatc 8 Fanondrahana Shampoo Afovoany
Ny fampiasana azy dia ampiasaina ho an'ny viscosité ambany sy ny famenoana ny sakafo sy ny zava-pisotro, ny zavatra simika isan'andro, pharmacutcial, pesticide sy indostria hafa, toy ny solika, rano rano fisotro rano rano, tantely, dity pastera sy ny sisa. Ny fanamafisana ny famaranana nozzle No: 4 6 8 10 12 mameno ny mari-pahaizana: 0.5% compressor compressor: 4-6Mpa: 220-50ml 15-250ml 25-500ml Tsy misy tavoahangy tsy misy famatsiana ary Raha ny fahitana azy, dia tsy misy sidina mavesatra mavesatra ny 50 tsy vita amin'ny vy, ny kalitaon'ny tigra avo lenta ary ny ampahany mifandray amin'ny material dia ny 1000 tsy mety ...
Ny 50-500ml Paste sy ny ranom-pamoahana masira ho an'ny kosaron-tsakafo kosmetika ho an'ny pasteur ho an'ny sakafo, fanafody isan'andro, agrochemika, fanafody ary ireo zavatra simika hafa. Izy io dia fitaovana tsara indrindra ho an'ny fikajiana avo lenta sy ny famafazana fanafody, famenoana ny fametrahana pneumatic, ho an'ny famokarana ambony. Ny ampahan'ny pneumatic dia manamboatra singa pneumatic AIRTAC, miaraka amin'ny dingana roa ambony accuracy. Ny isan'ny famenoana firaka dia azo ampiana araka ny zavatra takinao. Afaka manampy asa hafa fanampiny izy, toy ny fepetra ilaina, toy ny karazana fipoahana, rafitra fitrandrahana ranoka, sns. 1. Nosoloina ny fotodrafitrasa mitovy amin'ny any ivelany ny milina. 2. ...
Fampidirana ny milina: Fanafody famonoana ranom-panafody sy kapila mihodina dia vokatra azo ampiasaina amin'ny orinasa misy antsika. Izany dia mampihatra volam-pandaminana feno volom-bidy izay manome antoka ny fametrahana ny mari-pamantarana avo lenta sy ny rafi-pikirakirana. Ary noho izany izao no be mpampiasa milina ao amin'ny famenoana sy ny capping ny viscous rano toy izany saha fanafody, sakafo, zavatra simika, ara-pahasalamana sy ny fanatsarana tarehy sns vokatra ny lafiny Main ny milina Mety hamita avy hatrany tavoahangy sakafo, dosing famenoana, Cap sakafo sy capping mba hizara ny fahaiza-manao ambony sy ny malaza amin'ny famokarana indostrialy isan-karazany; Ny tsora-kazo dia misy amin'ny rafi-pisotroana tavoahangy ...
Fanondrahana Shampoo automatique / Fanondrahana ny Shampoo / Fametrahana fametrahana Shampoo
Izany dia 13 loham Linear piston famenoana milina, indrindra natao ho an'ny viscous isan'andro vokatra simika toy izany DETERGENT shampoo, vatana menaka fanosotra amin'ny hoditra gel ranonorana sy ny sisa. Voakarakarain'ny PLC sy ny fanaraha-maso fanaraha-mony. Rafitra matevina, fandrosoana tsara, fikorotanana mivaingana, ary tabataba kely, fihodinan'ny alimanaka sy haingam-pandeha haingana. 1. Manangana teknolojia fampandrosoana mekanika sy elektrika. Ny famenoana fitenenana dia azo atao mora foana amin'ny fanovana ny safidin'ny safidy. Tsy vitan'ny hoe mihena ny volan'ny famenoana 13, fa ny lamosina tsirairay ihany koa dia afaka miova tsikelikely. 2. Miaraka amin'ny teknolojia PLC, izay mahatonga ...
Pneumatic Shampoo Liquid Soap Lasantsina marevaka fanondrahana fandoroana lamba
Manam-pahaizana mangatsiaka sy fametahana masiketsaka ampiasaina amin'ny sipo, saosy, ny gel, ny solika sy ny lena ary fitaovana hafa ho an'ny sakafo, kojakojam-panafody, pharmaceutique sy ny orinasa orinasa, indostria zava-pisotro. mando, marina tsara amin'ny fikajiana, ary tsotra amin'ny fampiasana azy, ampiasaina amin'ny orinasa madinika sy ny mpampiasa azy. Technical fikirana Miasa malefaka: 220V / 50HZ 1phase Mameno fahaiza: 5g-150g Mameno loha: ny iray Materail: SUS304 (SUS316Lcan ho customed, SUS316L) Production ny tahan'ny: 40-60 tavoahangy / min suitabel: fanosotra, menaka manitra, shampoo, menaka fanosotra amin'ny hoditra fandroana gel , volon-koditra, savony solika sns. Fanamboarana rivotra: 23l / min Dimension: 442 * 440 * 1680mm Package: trosa hazo Payment: T / T, 40% deposit after ...
Ity milina ity dia mety amin'ny famenoana shampoo, savony. Izy io dia manamboatra rafitra servo, miaraka amin'ny haingam-pamokarana avo lenta ary mameno ny mari-pahaizana. Ny mpihazakazaka dia afaka manitsy ny volan'ny fameno eo amin'ny efitranom-pamokarana mivantana, mora atao ary mamonjy fotoana. Ny fantsom-pamokarana dia natao manokana ho an'ny fitsaboana. Ny sanda ara-teknika Sasin-tsarimihetsika 250ml-5L Speed ​​3000bottles / ora (250ml) Error range ≤ ± 1% Lasa standard Single radio noise ≤50dB Power 220 / 380V 50 / 60Hz 2.0-3.5Kw Pressure air pressure 0.6 ~ 0.8Mpa Control speed Frequency conversion Dimension L3500 * W850 * H1800 Weight 1000Kg Quick Details Karazana: Famenoana ny fepetra fanatanterahana: fampiharana vaovao: Karazana fikarakarana fako: tavoahangy fanodinana fitaovana: sokajy fahazoan-dàlan'ny hazo: karazan-drivotra matevina: fiatrehana pneumatic: 380V Power: 1.5Kw toerana ...
Famokarana orinasa mpamokatra orinasa tsara kalitao Shampoo
Feature A. Nanaiky ny rivotra nasiam-panitsiana ny rehetra, noho izany izy ireo dia mety tsara amin'ny fampiasana amin'ny fangatahana tontolo iainana manohitra ny fipoahana, manana fiarovana ambony. B. Tsy mitranga ny endriky ny jiro elektrilika, ny famakiana herinaratra ary tsy ilaina ny mampifandray ny tariby C. Ny rehetra dia manaiky ny fifehezana ny pneumatic ankoatra ny fametrahana ny fitaovana elektronika, noho izany izy ireo dia manana fepetra avo lenta satria ny fepetra dia azo fehezina amin'ny 0.5%. (Miaraka amin'ny lehibe indrindra habetsaky ny famenoana toy ny fitsipika) Technical fikirana Type boky Mameno TVF -5ml 5-60ml TVF-10ml 10-120ml TVF-25ml 25-250ml TVF-50ml 50-500ml TVF-100ml 100-1000ml ...
Voangy fiara manala totohondry feno pneoma feno vata famarana
Ireo endri-pamokarana AVF Series dia natao hametrahana ny vokatra avy amin'ny gripa samihafa, manomboka amin'ny ranon-drano manify manify ho an'ny menaka manitra, ho an'ny kosmetika, sakafo, pharmaceutika, solika ary indostria manokana. Quality assurance 1. Ny andian-tsambo dia manana kompàta, mifanentana tsara ary endrika tsara sy tsotra. 2. Izy ireo dia avy amin'ny singa pneumatique Festo avy any Alemana, ary ireo fitaovana elektrônika MITSUBISHI avy any Japan. 3. Ny singa rehetra mifandray amin'ny vokatra vokatra dia natao tamin'ny 316 L stainless steel imported, ary novokarin'ny milina CNC. Ny tsipiriany momba ny vokatra Name Good quality automatique kosmetika filling machine Fonosana bottle filling machine Garantie 1 Year Bottle ...
Ny famokarana masira fanenana NP-S semi-automatique dia natao tamin'ny 304SS, pneumatique driven, manamboatra ny rivodoza airtac na festo ho an'ny mpanjifan'ny takian'ny mpanjifa. Izany dia fangatahana famenoana ranon-javatra matevina amin'ny ranon-drongony, toy ny shampoo, solika, crème, lotion ary ny sisa. Ny famonoana ireo fantsona dia mihidy fantsona izay miasa ho an'ny dipoavatra, mihidy avy hatrany rehefa tapitra. Ny haben'ny famenoana dia mifehy ny famelezana ny piston, ny famenoana haingana dia afaka hahatratra ny 40bottles / min isaky ny 100ml. Ny fepetra 1.20L Top Hopper sy ny famindrana enti-manidina dia natao ho an'ny safidy 2.for famenoana pasteur-nao toy ny ditepasta, sauce ary koa ranon-javatra matevina toy ny rano ...
Sakafo hafakely mameno kitay
Ny fametahana masira fanenon-tsakafo NP-LSP, sachet forming, famenoana sy famehezana dia azo ampiasaina amin'ny famonosana ranon-tsavoka mangatsiaka, ranon-drongony, toy ny sira, ny sakafo, ny shampoo, ny ronono, ny sauce, ny fitsaboana. Ny fitaovana fametahana dia ahitana karazana sifotra hafanana, toy ny PET / plated AL / PE, PET / PE, NYLON etc. Features 1. Ny fanakambanam-panorenana rehetra tsy misy fefy dia mifanaraka amin'ny standard GMP. 2. Ny milina dia tsara ho an'ny famenoana mafana sy ny fametrahana mpilatsaka an-tsitrapo miankina amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa. 3. Fanitsiana fanamafisam-peo amin'ny habe sy ny famenoana. 4. Manam-pahefana manodina fantsom-pamokarana, dia afaka miasa ny ora 24 ny milina. 5. Ny toeram-piasana dia tarihan'ny American intel.
Tavoahangy mavesatra ny kitapo mavesatra
Ny famokarana masira fanontana shampoo dia natsangana sy novokarin'ny NPACK. Ny serivan-tserasera dia voatery ary lohan'olona roa no feno, fa haingam-pandeha. Mety hahatratra ny 40bottles isaky ny tavoahangy 300ml izany. Ny tavoahangy shampoo tavoahangy dia mety amin'ny endrika tavoahangy shampoo, tavoahangy tapa-tavoahangy, tavoahangy tery, tavoahangy boribory, tavoahangy oval ary endrika hafa. Ny tavoahangy shampoo tavoahangy dia natao manokana amin'ny famenoana ny shampoo na makiazy hafa izay tsy dia 1000ml. Ny tavoahangy dia tafiditra amin'ny birao roa izay hitazona ireo tavoahangy mba hamenoana, tsy mila bobina milina. Ny tavoahangy fanafody fanariana shampoo ...
Fonosana vita amin'ny tavoahangy fantsom-bilany
Masolotry ny solifara feno volom-borona feno volonkazo